Lapho ukudla okucebile kusondela ekupheleni, izivakashi eziningi azifisi ngesipho sokunambitha ikhekhe le-dessert. Kunzima kakhulu ngamaqebelengwane esiswini, amafutha amakhekhe ambalwa kakhulu. Khonza izivakashi ze-curert ushizi wekhasi. I-iresiphi ngesithombe izokusiza ukuthi uyifinyelele ngokushesha futhi ngaphandle kokuzikhandla. I-desserts ihamba kahle nge-fantasy ukuhlobisa. Umbala wabo ogqamile nokunambitheka okucebile kuzokhunjulwa isikhathi eside yizivakashi. Ungaphinda upheke ikhekhe le-jelly lonke. I- high- calorie yamancane, ngoba iyoba nekhekhe elilodwa lekhekheji. Funda kulesi sihloko izindlela zokupheka ezihlukahlukene zokwenza i-jelly ne-cottage shizi bese upheka ama-dessert okumnandi.
Kusuka ku-cottage ushizi nobisi
Ukufudumala sizoqala, mhlawumbe, nge iresiphi elula. Esikhathini sesidlo sokugcoba, leli jelly le-curd alithinti, kodwa lifanelwe ukudliwa ngumndeni ngesikhathi sekuseni. Sifaka kancane kancane umkhumbi ophethe ingilazi yobisi. Engeza amathisipuni amabili we-sugar granulated, gxuma kahle uze uqede ngokuphelele. Lapho nje izimpawu zokuqala zokubilisa zivela ebisi, sivala umlilo. Engeza isipuni sesobho se- gelatin yokudla okusheshayo . Hlanganisa, vumela ukushisa ekamelweni lokushisa futhi uhlanzeke esiqandisini (noma, ngenkathi ebandayo, ngokushesha ufake i-pan emkhathini). Lapho ubukhulu bukhulu ngokwanele, siwuxuba nomxube ngegremu eyi-baby curd (nge-vanilla, omisiwe noma ama-apricot omisiwe). Idayisi isakazeka kremankami futhi yathunyelwa esiqandisini ukulinda isidlo sakusihlwa. Ngaphambi kokukhonza, ungakwazi ukuhlobisa ngamaqabunga ama-mint noma amajikijolo.
Manje ake sicindezele umsebenzi wethu. Gwema ama-gramu angu-25 we-gelatin engxenyeni yesilazi se-cool 10% ukhilimu noma ubisi lonke. Senza lokhu emgodini wensimbi. Ngesikhathi sesigamu sehora ama-crystals avuvuka, sibeka isitsha endaweni yokugeza amanzi. Lokhu kusho ukuthi esitsheni esikhulu ngamanzi abilayo sizobeka igag. Ngaso sonke isikhathi, gqugquzela ingxube kuze kube yilapho i-gelatin ichithwa ngokuphelele. Ungalethi emathumba, ususe emlilweni. I-Curd (400 g) idluliselwa ngesihlungo. Lokhu kuzokwenza kube lula ngathi ukuba siwuqhube ngezipuni eziyisithupha ushukela. E-sweet cottage shizi sifaka u- 400 ml wekhilimu omuncu. Siyixoqa. Siyixhuma ngekhilimu nge-gelatin. Sihlanganyela konke ezintweni ezimbili. Ngomunye wabo sinezela izinkezo ezine ze-cocoa powder bese uxuba kahle. Manje siqala ukulala phezu kwe-cottage ushizi we-dessert jelly "i-Zebra". Ngezansi beka ubukhulu obumhlophe obuncane, uhlasele ummese. Okulandelayo, faka ungqimba obunundu. Bese futhi mhlophe futhi njalo. Ukuhlobisa phezulu kwe-dessert ngama-chips angama-coconut bese uyibeka amahora amaningana esiqandisini.
I-jelly curd enezithelo
Ngalesi sidlo, kungcono ukusebenzisa amaphayinaphu ekheniwe ngesiraphu, i-melon amabhola noma i-peaches. Ngamafuphi, zonke izithelo, lapho kukhona khona ijusi eningi, zizokwenza. Okokuqala, gcwalisa iphakethe le-gelatin ngilazi yamanzi afudumele. Beka emlilweni bese uyishisa kuze kube yilapho i-thickener ye-jelly ichitheka. Ngenkathi ingxube ipholisa phansi, uthathe isithelo sibe yi-cubes bese uyisakaza ku-kremanki, ugcwalise cishe cishe kwesigamu. Amagremu angamakhulu amane e-cottage shizi azoxubha ngesihlungo. Siyixuba ngezibuko ezimbili zamakhemikhali omuncu omncane kanye nekomishi lokushukela oluyimpuphu. Engeza i-gelatin encibilikisiwe ebuningi. Ingxenye yengxube isakazwa phezu kwe-kremanki - phezu kwesithelo. Hlanganisa phezulu ngommese. Engxenyeni yesibili, engeza izipuni ezimbili noma ezintathu ze-cocoa. Sixuba futhi sibeke ezikhoneni phezu kocingo olumhlophe. Sizobeka i-dessert esiqandisini amahora amathathu. Ngaphambi kokukhonza, zihlobisa ngamaqabunga e-mint.
Jelly kusuka amajikijolo amasha
I-cottage ushizi omusha nge-blueberries yi-classic. Futhi uma zihlangene ku-jelly, lokhu kuphumela ekudleni kwangempela kokunambitheka! Siqala ukulungiselela ngendlela efanayo njengokwenza iresiphi yangaphambilini - senza i-gelatin namanzi amaningi. Ama-gramu angu-200 we-cottage ushizi siwasula nge-sieve. Gcwalisa nge ingilazi yamanzi e-orange (fresh is more preferable). Engeza izinkezo ezimbalwa zomuthi ushukela. Sifuba nge-blender. Sithelela kulokhu okuyingxenye yesithathu ye-thickener kanye nengilazi yekhilimu. Faka futhi uthele ku-kremankam. Sibeka ama-vases efrijini bese sithatha amajikijolo. Ngama-gramu angu-150 ama-blueberries nama-raspberries esiwagcoba ezitsheni ezihlukahlukene ku-puree. Engeza esitsheni ngasinye sesithathu kwe-thickener. Uma i-jelly curd igxila kancane, uthele ama-raspberries kuso. Sifaka esiqandisini ngehora lesehora. Lapho i- jelly yokusajingijolo ibamba futhi , sisakaza isisindo se-blueberry. Sivala ifilimu ngayinye yokudla kremanku. Ukuhlobisa i-dessert kuzoqala amahora amane emva kokuhlala kwabo esiqandisini. Ukuze uthole ukuhlobisa, ukhilimu ophuziwe kanye nezinhlamvu ezimbalwa zamajikijolo aphelele azokwenza.
I-jelly ne-cottage shizi ne-yogurt
Siqala ngokulungiswa kwe-thickener. Ngenkathi ipholile, sizoshukumisa noma sihlanze nge-sieve 200 amagremu we-cottage shizi entsha. Manje lokhu kukhululeka okuxubile kuhlanganiswe nezipuni ezintathu ngeglasi leshukela. Engeza amaphakheji amabili ajwayelekile weghuthi (angaphuzi) nganoma yikuphi ukunambitheka kwezithelo. Faka futhi uthele isigamu seglasi lesikhilimu (amafutha aphakathi). Ekugcineni, engeza i-gelatin ehlanjululwe. Manje sizocabangela ukuthi singakhonza kanjani i-jelly yethu yangempela. Izithombe ezitholakala emasimini okugaya zisinika imibono eminingi ethakazelisayo. Nangu omunye wabo. Isitsha esinamahlangothi aphakeme senziwe ngefilimu yokudla. Masivule umzuzu ubukhulu be-lumpy. Shiya ukufomisa emakhazeni. Manje sizohlwanyela ngamacube amancane. Ngaphansi kwe-tartlets ake sibeke i-spoonful ye jam obukhulu. Sifaka ebhasikisini i-curd-yoghurt jelly. Okuphezulu ngokuphuma.
Le dessert ifanele kulabo abasendleleni yokudla. Gweba izipuni ezimbili ze-gelatin esheshayo emanzini. Ngemuva kwesigamu sehora ubeke umlilo, ugxume futhi ushiye ukupholisa. I-cottage ushizi (200 g) isuliwe nge-sieve futhi ixutshwe nesamba esifanayo noshukela. Ungayithatha enye yayo ngoshukela omanzi. Amafutha e-Kefir ajwayelekile (400 ml) afudumele kancane. Thele ku-cottage shizi. Lapho futhi sinezela i-gelatin. I-strawberries encane noma efriziwe (kodwa nanoma yikuphi amanye amajikijolo ayophinde afanele) ihlanganiswe ne-blender noma iforque elula. Futhi engeza ku-jelly curd. Masiphuze elinye lemon noma orange orange. Lokhu kuzofaka ukunambitheka ku-dessert. Gubha umkhawulo we-kremanki emanzini, bese ungena emanzini ekhonathi. Kuzovela njengeqhwa. Sifaka i-jelly ku-kremankami. Sifaka efrijini amahora amathathu. Sizohlobisa i-dessert ngama-berries amaningi, amaqabunga ama-mint kanye ne-jam.
I-jelly ne-cottage ushizi no-ukhilimu omuncu
Sizosebenzisa izithelo ezisemathinini kulo mkhiqizo: peaches, amapinapula noma i-cocktail assortment. Ukulinganisela ukunambitheka okumuncu ukhilimu omuncu, isithako esiyinhloko akuyona i-curd evamile, kodwa ubuningi bezingane - nge-vanilla noma omisiwe. Kodwa siqala umsebenzi, njalonjalo, lapho sibhekene ne-jelly, ngokulungiswa kwe-thickener. Ngesikhathi i-gelatin ipholile, izithelo ezisikiwe (ama-peaches amabili noma izindandatho eziningana ze-ananas). E-cottage cheese yezingane (amagremu angu-400), engeza ingilazi yamakhekhe omuncu kanye noshukela olugqamile. Sithutha ukuhlalisana. Manje ungangeza i-gelatin encane ehlile. Siphonsa ukhilimu omuncu we-jelly futhi . Beka izithelo phansi kwe-kremanki. Sifaka isigamu inani le-jelly kuzo. Kule nsalela, faka izipuni ezimbili ze-cocoa powder. Faka futhi ubeke phezulu kwengubo emhlophe ye-dessert. Sibeka ama-kremanki emakhazeni amahora amabili noma amathathu. Sihlobisa ukhilimu ohlutshiwe, izithelo ezikhishwe kanye namantongomane.
Ikhekhe le-biscuit-cottage cheese ne-jelly
Le dessert iyoba yindlela enhle kakhulu emva kokudla okunengi. I-jelly ephezulu phezulu kwekhekhe ibheka kahle futhi ijabulisa ukudla, ikakhulukazi ehlobo elishisayo. Okokuqala, bhaka ikhekhe lebhayisikili. Amafutha athambile (50 g) ahlanganiswe no-75 g ushukela. Engeza amaqanda amathathu nezinkezo ezimbili zosawoti omuncu. Sithutha ukuhlalisana. Engeza ufulawa kanye nesikhwama se-powder baking. Inhlama kumele ibe "imanzi". Sifaka ama-2-3 amapuni we-cocoa kanye nesikhombisa samantongomane. Hlanganisa, uyibeke esikhunjini bese uyibeka ebhakeni. Manje sesilungisa ungqimba lwesibili wekhekhe le-cheese. Sidlula amagremu angamakhulu amabili we-curd nge-sieve. Hlanganisa nengilazi yamakhekhe omuncu nama-2-3 wezipuni ushukela oluyimpuphu. Spread lokhu mass ngokukhekhelwa okwenziwe futhi kakade selehlile ibhasikidi. Sibeka ikhekhe efrijini ukuze ikhekhe le-cheese lithathwe ". Ukusuka ngenhla kungenziwa njengendlela evamile, izithelo, kanye ne-curd jelly. Ukuze senze lokhu, silungiselela i-thickener, sixube ne-cheese mass, sikubeke emakhazeni. Lapho i-jelly iba i-viscous, isakaze phezu kwekhekhe.
I-recipe ye-cookie curd i-godsend yomama
Novosibirsk ezikhangayo: izikhumbuzo kanye amaphuzu athakazelisayo
Inxanxathela "Izibuyekezo Samozdrav '
Yini okumele uyenze uma udinga ngempela umphimbo obuhlungu?
Tifo letibangwa emasendeni ezingabantu
Northeast Russia: ubukhulu, isiko, umlando kanye nokuthuthukiswa esifundeni